Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Onye na -eto eto ugbu a na -alụ ọgụ maka nsogbu ihu igwe na Milan
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akwụkwọ akụkọ Italy • nzukọ • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Ihe profaịlụ Facebook nke Federica Gasbarro nke ya na Greta Thunberg sere ya. Ọ bụ Septemba 2019 - ha abụọ nọ na New York maka nzukọ ndị ntorobịa UN nke mbụ na ihu igwe.
Federica Gasbarro, 26, na Daniele Guadagnolo, 28, ga -abụ ndị nnọchi anya Itali abụọ na nnọkọ Youth4Climate: "Ọchịchọ ịnya ụgbọ ala," nzukọ ọgbakọ zuru ụwa ọnụ ọzọ maka ndị na -eto eto iji lụso mgbanwe ihu igwe.
Nzukọ a ga -emepe ebe Ịtali ga -abụ isi okwu na arụmụka na atụmatụ ịgbachitere gburugburu.
Ihe dị ka 400 n'okpuru afọ 30-2 maka mba 197 so na Mgbakọ Mba Ndị Dị n'Otu Maka Mgbanwe Ihu Igwe (UNFCCC)-ga-ezukọ na Milan, MiCo Congress Center, site na Septemba 28-30, 2021.
Ụmụ agbọghọ na ụmụ nwoke ndị nọla ọkachamara ma ọ bụ na -amụ ụzọ gburugburu ebe obibi ga -esonye.
Onye minista na -ahụ maka mgbanwe gburugburu ebe obibi, Roberto Cingolani kwuru, "Ọ bụ oge, nke ndị na -eto eto si na ngagharị iwe na -abanye n'ime atụmatụ ahụ. Nsogbu ihu igwe gụnyere ike mkparịta ụka ọgbọ. Na Milan, ọ ga -abụ oge anyị ga -anwa ime ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. ”
A ga-ekewa arụmụka ahụ na mpaghara 4, na ebumnuche nke imepụta atụmatụ dị iche iche: ebumnuche ihu igwe, mgbake na-adigide, itinye aka na ndị na-eme ihe na-abụghị gọọmentị, na ọha maara nke ọma. nsogbu ihu igwe. Federica Gasbarro kwuru, "Anyị nwere atụmanya dị elu, atụmatụ anyị na -esite n'ajụjụ ọnụ gafere n'etiti ndị Italy na -eto eto nyefere onwe ha na gburugburu ebe obibi. Na Milan, anyị ga -eso ndị nnọchi anya mba ndị ọzọ kerịta ha ka ha bịarute n'otu akwụkwọ. ”
N'ime ndị ga -ekwu okwu ga -abụ ndị isi 2 nke "Fraịde maka Ọdịnihu" - Greta Thunberg na Vanessa Nakate. Naanị n'ụtụtụ a, ndị otu Italiantali laghachiri na ngagharị n'ọtụtụ obodo, na -ekwupụta oke iku maka Fraịde, Ọktọba 1, ya na Greta n'onwe ya n'ámá dị na Milan na -eme mkpesa maka enweghị aka gọọmentị.
N'ịlaghachi na oge ntorobịa Youth4Climate, a ga-ewetara ndị isi bịarute na Milan akwụkwọ ikpeazụ, na MiCo, maka nzukọ Pre-COP26. A ga -eme nke ikpeazụ site na Septemba 30 - Ọktọba 2, Mịnịsta Cingolani ga -ebido ya n'ihu Onye isi ala, Sergio Mattarella; Prime Minista Mario Draghi; na Prime Minista Britain Boris Johnson.
Ihe omume Pre-COP26, nke dị ka Youth4Climate, na-ewere ọnọdụ na COP26, Nzukọ Mba Ndị Dị n'Otu Maka Mgbanwe Ihu Igwe na Glasgow site na Ọktọba 31-Nọvemba 12 na mmekorita ya na Italy. N'ime afọ iri atọ, UN achịkọtala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba niile maka ọgbakọ ihu igwe zuru ụwa ọnụ n'oge nke emebere mmemme ndị a dị mkpa dịka mbinye aka nke Protocol Kyoto na 1997, na nkwekọrịta Paris na 2015. N'afọ a, COP26, nke mba ga -ewepụta atụmatụ emelitere iji belata nsị ha, na -eme na oge dị oke nro - mgbe oge ọkọchị nke idei mmiri na ọkụ gosipụtara ịdị ngwa ịgafe karịa ka ọ dị na mbụ. A na -atụ anya ihe karịrị ndị isi ụwa 190 na Scotland, ọtụtụ iri puku ndị mkparịta ụka, ndị nnọchi anya gọọmentị, azụmahịa na ụmụ amaala sonyere maka mkparịta ụka ụbọchị iri na abụọ.
COP ọ bụla na mgbanwe ihu igwe na-ebute nzukọ nkwadebe emere ihe dị ka otu ọnwa tupu mgbe ahụ, kpomkwem Pre-COP, nke na-achịkọta ndị minista ihu igwe na ume nke otu mba ahọpụtara ka ha kpaa maka akụkụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mkpa nke mkparita ụka ahụ ma mikwuo isi okwu. nke a ga -ekwuzi na ọgbakọ ahụ. Ihe dị ka mba 40-50 ga-eso ndị nnọchi anya UNFCCC na ndị nkịtị sonye na Pre-COP na Milan.
Ka ọ dị ugbu a, All4Climate na -aga n'ihu, mmemme nke Ministry of Ecological Transition na Connect4climate nke World Bank, yana ntinye nke mpaghara Lombardy na Obodo Milan. A na -eme atụmatụ ihe karịrị narị ise na Italy niile, nke ụlọ ọrụ, mkpakọrịta, ụlọ ọrụ ọha, na ndị mmadụ n'otu n'otu haziri iji mee ka a mata na ihu igwe. N'ime atụmatụ dị na Milan, na Septemba 500 na San Siro Hippodrome, a ga -ewepụta egwu Music30Climate, nke PianoB mepụtara, ọ ga -adịkwa na livemusic.tv.